On 2 818 jidadka miyiga ee loo yaqaan 'Cameroon' ee 2018, kaliya 114 ayaa ku jira xaalad wanaagsan - TELES RELAY
ACCUEIL » DHAQAALAHA On 2 818 oo ku yaal waddooyinka miyiga ah ee Cameroon ku yaal 2018, 114 keliya ayaa ku jira xaalad wanaagsan
On 2 818 oo ku yaal waddooyinka miyiga ah ee Cameroon ku yaal 2018, 114 keliya ayaa ku jira xaalad wanaagsan
(Invest in Cameroon) - Sida laga soo xigtay Waaxda Howlaha Guud (Mintp), waddooyinka 2 818 waddooyinka miyiga ah ee 2018 XNUMX ayaa lagu kala qaaday XNUMX. "Good", "Dhexdhexaad" iyo "Bad" waa qaybaha ugu waaweyn.
Laga soo bilaabo kala soociddan, waxay u muuqataa in wadooyinka 114 kaliya ay ku sugan yihiin xaalad wanaagsan, sida heerka 4,04%. Qeybta "celceliska gobolka", waxaan xisaabeynaa jidadka 844, ie 29,9%. Ugu dambeyn, qaybta "xun", waxaa jira wadooyin 1860 ah, sida heerka 66%. Tirakoobkan, ayaa sheegay in Mintp, uu sii wadi doono sanadkan 2019 ee 200 Commons ka dhan ah 50 2018.
Wasaaraddan ayaa rajaynaysa inay hagaajiso waddooyinka waddooyinka miyiga ah ee Cameroon iyada oo loo marayo Miisaaniyadda Maalgalinta Dadweynaha (BIP) oo khayraadkeeda loo wareejiyo degmooyinka. Ugu dambeyntii wuxuu sii wadi doonaa bixinta qandaraasyada ama maaraynta shaqooyinka ka jira aaggooda aqoontooda. Inta udhexeysa 2013 iyo 2018, khayraadka sanadlaha ah ee loo wareejiyo mujaahidiinta waxaa lagu qiyaasay bilada 67 ee FCFA.
Intaa waxaa dheer, iyada oo loo marayo Sanduuqa Wadada ee 1998, duqaayadaha, sida hey'adaha wax soo iibsanaya, waxay sii wadaan abaalmarinta iyo abaalmarinta qandaraasyada la xiriira. Suuqyadan waxaa la bixiyaa waqti go'an oo u dhaxeeya 30 iyo 45 maalmood. Nidaamka cusub ee cusub ee bisha April ee 2017, qadar lacageed oo ah 8,1 bilada FCFA ayaa loo hirgeliyey degmooyinka loogu talagalay laylinta 2018.
Rwanda: Dalka ugu dhakhsaha badan ayaa lagu magacaabi doonaa dakhli dhexdhexaad ah? - YoungAfrica.com
Dakhliga xayawaanka reer koonfureed ee Cameroon ayaa kordhay by 122% ee 2018 ilaa bilyan doolar FCFA